Ogaden News Agency (ONA) – Shir balaadhan oo lagaga hadlay arimaha amniga iyo guurka
Shir balaadhan oo lagaga hadlay arimaha amniga iyo guurka
Maalinnimadii Arbacada ee taariikhdu ahayd 23/10/13 waxaa xerada Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay shir aad ubalaadhan oo ay kasoo qayb galeen hay’ado caalami ah iyo bulshada qaybaheeda kala duwan.
Shirkan oo ay wada jir udoo qaban qaabiyeen hay’ado dhowr ah oo deegaanka ka howlgala iyo dowladaKenya ayaa lagu macsuumay qaybaha kala duwan ee bulsha waxaana dadkii lagu casuumay kamid ahaa ururuka dhalainyarada OYSU Dhagaxlay oo matalayay bulshada S.Ogadenya ee ku dhaqan xeryaha.
Shirka waxaa kasoo qaybgalay hay’adaha kala ah UNHCR, FWF, CARE iyo madaxa police-ka ee deegaanka.
Sidoo kale waxaa shirka kasoo qayb galay culimada ugu caansan deegaanka sida sh Shamsudiin iyo sh Cali nuur iyo waliba odayaasha xerada qoxootiga iyo odayaasha deegaankaba.
Shirka waxay muhiimadiisu ahayd 2 qodob oo kala ah amaanka iyo guurka ayaa aad loogu dheeraaday qodobka amaanka oo ah arin ay bulshadu u oomantahay waxaana la isla qiray in uu amaanku yahay waxa kaliya ee dadkan aadka ubadan ee malaayiinta ah kuwada joogi karaan hadii lawaayana uu qof walba ku qasbanyahay in uu kulaabto meeshii uu amaan daro uga soo qaxay markii horaba.
Mar laga hadlayay qaabka loo ilaalin karo amaanka ayaa la sheegay in laqaato dhaqan ama amar wadanka oo dhan ka hirgalaya oo la doonayo 10kii guriba loosameeyo 1 qof oo lagala xisaabtamo taas oo ay bulshadu qaateen sifo amaan xumada xerya faraha kulul ku haysa looga baxo. Waxaa sidoo kale aad loogu dheeraaday sidii loola shaqayn lahaa laamaha amaanka ee xeryaha kashaqeeya.
Dadkii shirka kasoo qaybgalay ayaa kahadlay arima la xidhiidha guurka oo baryahan cirka isku shareeray oo hanti aad ubadan lagu gubo waxaana arintaas aad uga hadlay culimada iyo odayaasha iyadoo ugu danbayntii ninkii police ka ugu sareeyay uu soo jeediyay qodobadan kala ah 1- In lajoojiyo gabaatiga dhamaantiiba. 2- In la joojiyo baabuurta faraha badan ee lawareejinayo. 3- In lajoojiyo geela laqalayo gabi ahaanba. Wuxuuna aritaas qasab kaga dhigay ninka wax guursanaya iyo midka laga guursanayaba.
Arintan lagaga hadlay guurka ayaa daba socotay shir balaadhan oo ay culimadu ku qabteen masaajid ku yaala xerada Dhagaxlay oo guurka lagaga hadlayay.
Guud ahaan; arimahan laga hadlay haday dhaqan galaan waxaa ka faa’iidaysan doona dad aad u badan oo ay kamid yihiin qoxootiga S.Ogadenia ee ku dhaqan deegaanka hadii ay amaan xumadu sii socotana waxay aad u taabanaysaa dadweynaha ku jira xeryaha qaxootiga oo amaan xumo baahsan wadankoodii uga soo qaxay.